ZVAKANAKIRA Zvaakazoita waakaita nesilicon CARBIDE
Zvaakazoita waakaita nesilicon Carbide (RBSC, kana SiSiC) zvigadzirwa kupa hwakanyanya pokuoma / abrasion nemishonga uye kunoshamisa makemikari nokugarika hasha runyararo. Nesilicon Carbide chinhu chakaita zvokugadzirwa zvinhu kuti akava mukuru waivako unhu kusanganisira:
k Excellent makemikari nemishonga.
Simba RBSC riri kusvika 50% hukuru kupfuura vakawanda nitride waakaita nesilicon carbides. RBSC ndiye rakaisvonaka ngura nemishonga uye antioxidation zvedongo .. Rinogona kuumbwa kuva siyana desulpurization kamwene (FGD).
k Excellent kusakara uye nomugumisiro nemishonga .
Zviri porusvingo pamwero abrasion nemishonga zvedongo rwokugadzira. RBSiC kuva mukuru pokuoma kuuya iya nedhaimani. Akagadzirirwa kushandiswa mune zvikumbiro zvitarisiko huru apo refractory mamakisi ose nesilicon carbide vari nedzokunze hasha kusakara kana kukuvara kubva kwechirwere huru inoramba. Husingakwanisi zvakananga impingement chiedza nezvimedu uyewo kukanganisa uye zvishoma nezvishoma mumatope abrasion inorema nezvishoma ine slurries. Inogona kuumbwa kuva siyana maumbirwo, kusanganisira cône uye ruoko zvitarisiko, uyewo mamwe kunzwisisa engineered zvidimbu akagadzirirwa kuti midziyo munyaya kubudiswa mbishi zvinhu.
k Excellent chafariz kuvhunduka nemishonga.
Zvaakazoita waakaita nesilicon carbide zvinoriumba zvinopa hunoshamisa chafariz kuvhunduka nemishonga asi kusiyana nezvaiitwa Ceramics, ivo nokubatanidza yakaderera arambe achirema dzakakwirira simba zvokuimba.
k High simba (anowana simba panguva tembiricha).
Zvaakazoita waakaita nesilicon carbide anoramba vakawanda simba raro zvemaziso panguva yakakwirira tembiricha Exhibits yakaderera chaizvo kwevari zvinokambaira, zvichiita sarudzo rokutanga kuti mutoro inobereka kushanda vari kuwanda 1300ºC kuna 1650ºC (2400ºC kuna 3000ºF).
Zvaakazoita waakaita nesilicon Carbide
Nitride waakaita nesilicon Carbide
Recrystallized nesilicon Carbide
Modulus kuti elasticity
Confficient pamusoro chafariz kuwedzera
Raiva Mons 'pokuoma pamwero (Rigidity)
Industry Case For Zvaakazoita waakaita nesilicon Carbide:
Power Generation, Mining, Chemical, Petrochemical, hwebisiro, Machinery kugadzira maindasitiri, mamineral & simbi uye zvichingodaro.
Zvisinei, kusiyana nesimbi dzavo alloys, hapana kwezvipimo indasitiri waivako dzekuziva kuti nesilicon carbide. With zvakawanda nziyo, densities, kugadzira nzira uye ruzivo kambani, nesilicon carbide zvinoriumba vanogona zvinosiyana chaizvo mune kusachinja-chinja, uyewo zvemaziso uye nemakemikari zvivako. Your kusarudza nokutengesa anosarudza padanho uye kunaka zvinhu iwe kugamuchira.